Ady amin’ny valanaretina covid-19: totoafo ny famendrahana ranom-panafody mamono mikraoba | NewsMada
Ady amin’ny valanaretina covid-19: totoafo ny famendrahana ranom-panafody mamono mikraoba
Manomboka, anio, fendrahana ranom-panafody avokoa ny fokontany sy biraom-panjakana mandray olona betsaka eto Antananarivo sy ny manodidina. Hapetraka ihany koa ny toerana manokana hahafahan’ny rehetra manasa tanana matetika.
Nitondra fanamarihana, omaly, ny tompon’andraikitra ao amin’ny tobim-pibaikoana amin’ny ady atao amin’ny valanaretina covid-19 eny Ivato, ny jeneraly Andriankaja Elack fa hatao manerana ny toerana ivezivezen’ny olona ny famendrahana fanafody mamono mikraoba sy bibikely, manomboka eto.
Hatao manerana ny fokontany 192 eto an’Antananarivo izany fandrarahana fanafody izany. Hiitatra hatrany amin’ny fokontany rehetra ao Avaradrano sy Atsimondrano ary Ambohidratrimo ny fanatanterahana izany.
Eo koa ny biraon’ny distrika sy ny manodidina izay sehatra ahitana olona manao taratasy. Anisan’ny toerana be olona koa ny tsena, ny kaominina, ny fiangonana….
Hifarimbona amin’ny fanatanterahana ny asa famendrahana ranom-panafoddy ny avy ao amin’ny BMH sy ny mpamonjy voina. Hiaraka amin’izy ireo ny mpitandro filaminana avy ao amin’ny CPC. Efa arindran’ireo tompon’andraikitra eny amin’ny CCO ny lamina rehetra hanatanterahana izany mba hamongorana ny fiparitahan’ny valanaretina.
Toerana fanasana tanana
Ankoatra izay, apetraka ihany koa ireo toerana hahafahana manasa tanana ho an’ny daholobe. Efa voafaritra ireo toerana be olona mivezivezy hametrahana izany toy ny fiantsonan’ny taxi-be ka tsy maintsy manasa tanana ireo mpandeha sy ny mpamily ary ny mpanampy azy. Io no fepetra noraisina satria hita fa tsy araky ny taxi-be intsony ny mividy ilay « gel désinfectant » ka miraviravy tanana izy ireo manoloana ny fanarahana ny fepetra ara-pahasalamana.
Iantohan’ny fanjakana manontolo ny rano sy ny savony entina hanatanterahana izany mba hahafahan’ny rehetra manasa tanana matetika hisorohana hatrany ny fiparitahan’ny valanaretina.